Madaxweynaha Puntland oo amray In La Ilaaliyo Hantida Guud ee Dowladda | SAHAN ONLINE
Madaxweynaha Puntland oo amray In La Ilaaliyo Hantida Guud ee Dowladda
Garoowe –Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo maanta shir guddoominayay shirka gollaha wasiiradda ee Puntland ayaa ku adkeeyay dhammaan xubnaha gollaha wasiiradda Puntland ilaalinta hantida dowladda, gaar ahaan gaadiidka.
War-murtiyeed ka soo baxay shirkii gollaha wasiiradda ayaa sidoo waxaa laga hadlay guud ahaan amniga dalka, habka hubinta badeecadaha soo gala dalka, iyadoo warbixino laga dhagaystay wasaaradda ganacsiga.
“Golaha xukuumadda Dawladda Puntland ayaa ku dheeraaday ilaalinta hantida Umadda gaar ahaan gaadiidka G D ah, wuxuuna Madaxweynuhu ku adkeeyay dhammaan golaha inay mas’uuliyad saaran tahay golaha xukuumadda ilaalinta dhammaan hantida Dawladda” ayaa lagu yiri war-murtiyeedka.
Dhinaca kale, waxaa laga dooday hubinta tayada iyo bad-qadka dhammaan baddeecadaha dalka soo gelaya si looga ilaaliyo shacabka Puntland qatarta iyo waxyeelada baddeecaha dalka la soo gelinayo.
Wasiirka Ganacsiga Puntland Cabdiweli Indho-guran wuxuu tilmaamay in hannaanka tayo dhowr Puntland uu la mid yahay hannaanka tayo dhowrka Barigga Africa, sidoo kale wuxuu Madaxweynuhu u sheegay Wasaaradda in loo sameeyo shacabka iyo ganacsatada-ba wacyigelin guud oo ku saabsan khatarta iyo waxyeelada badeecaha dhacay ama sumaysan ay u geysanayaan caafimaadka bulshada.